कृष्ण धाराबासी | मझेरी डट कम
editor — Fri, 12/20/2013 - 21:39
अफिसबाट फर्किंदा साँझ परिसकेको थियो । बाटामा भेट भएका साथीभाइहरूसँग कार्यालयका, देशका, सरकारका आदि अनेक विषयका परिचर्चा गर्दै सबैसँग औपचारिकताको निर्वाह गर्दै घर आइपुग्दा प्रायः सधैँ ढिलै हुने गर्थ्यो ।
kbs — Sat, 11/05/2011 - 10:47
किन देख्यौ आमा
तिमीले त्यस्तो सपना ?
ऐठनजस्तो सपना ।
ती उदासी आँखा
kbs — Sat, 04/30/2011 - 18:28
सँगै हिँड्दाहिँड्दै उनको हातमा मुठी परेको मोबाइलमा घन्टी बज्यो । निकैबेरसम्म बज्न दिइरहिन् तिनले । एकपल्ट नम्बर हेरेर नउठाई हिँडिरहिन् लुरुलुरु । पूरै घन्टी बजेर थाकेको मोबाइल फेरि थाल्यो बज्न । मैले भनेँ, 'उठाउन मीरा ! किन दुःख दिएको त्यसलाई ?'
kbs — Mon, 10/18/2010 - 18:16
व्यक्तिगत जीवनका दुःख-पीडा र समस्याहरूमा समाजलाई जोडेर वा समाजका अप्ठ्याराहरूलाई व्यक्तिमा जोडेर सिर्जना गरिन्थ्यो, काव्य-कृति। अझ आख्यानको त्यति विकास नभएको काव्ययुगमा सबै कुरा उपदेशात्मक र कारुणिक बनाउन कविहरूले प्रशस्त मेहनत गरेका हुन्थे। पूर्वीय साहित्य काव्यात्मक छ। काव्यकै माध्यमबाट आख्यानको व्यवस्थापन गरिएको हुन्थ्यो। ती काव्यहरू अत्यन्त भावुक र कारुणिक हुन्थे। एउटा पात्रको जीवनमा सिङ्गै समाजलाई प्रतिस्थापित गरिन्थ्यो, त्यस्तै परम्परा बस्यो।
kbs — Mon, 08/23/2010 - 17:57
मेची अञ्चलस्तरीय महानन्द पुरस्कार स्थापना भएको २२ वर्षपछि २०६६ सालमा यो पुरस्कार समर्पण समारोहको आयोजना पाँचथरको सदरमुकाम फिदिमले गर्ने भएको थियो। ०४३ सालमा स्थापित यस पुरस्कारको समारोह पहिलोपल्ट ०४४ वैशाख ३० गते झापाको शनिश्चरेबाट सुरु गरिएको थियो। मेची अञ्चलस्तरीय भएकाले पालैपालो चारै जिल्लामा समारोहको आयोजना गर्ने धारणा रहे पनि झापा र इलामभन्दा माथि यो समारोह चढ्न सकेको थिएन।
kbs — Sun, 07/18/2010 - 08:57
छापामार युद्धमा सामेल भएका युवायुवतीहरूका बारेमा युद्धबाहिर रहेको समाजले जहिले पनि रहस्यमयी अनुमान गरिरहेको हुन्छ । खास गरी उनीहरूसँग एकप्रकारको अज्ञात त्रास अनुभव गरिरहन्छ । छापामारहरूमा पनि जसका लागि लडिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई नै तर्साएर आनन्द लिने बानी परेको देखिन्छ । हतियार साथमा भएपछि एकप्रकारको दम्भ हुनु त स्वाभाविकै हो । विजय मल्लको 'कृष्णे र खुकुरी' कथा एउटा सुन्दर बिम्ब हो हतियार दम्भको ।
तर यथार्थमा छापामार जीवनमा गएका युवाहरूभित्रका पीडा समस्या र द्वन्द्वात्मक भावुकताको अध्ययन छुट्टै तरिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू छापामार दुनियाँमा जानुका पछि दबिएर रहेका कारणहरूको समाजशास्त्रीय अध्ययन आनावश्यक छ । अहिले दस वर्षे जनयुद्ध समापनको घोषणा गरिएको तर छापामारहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको समय छ । त्यसो त माओवादीइतरका अरू थुप्रै छापामार संगठनहरू अझै सक्रिय अवस्थामा छँदै छन् र त्यतातिर आकषिर्त भइरहेको युवा जमात छँदै छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सक्रिय भएका संगठन तथा व्यक्तिहरू बाह्य आर्थिक स्रोतका आन्तरिक उपभोक्ताभन्दा बढी देखिँदैनन् । यो शान्ति प्रक्रियाको दोसाँधेकालमा जति सक्रियतापूर्वक यस विषयमा सोचिनु र अध्ययन गरिनुपर्थ्यो त्यसप्रकारको काम हुनसकेको छैन । यसबाट थाहा हुन्छ- हाम्रो देशमा गम्भीरतापूर्वक कुनै पनि कुरालाई हेर्ने शैलीको विकास भएकै छैन ।
kbs — Wed, 06/30/2010 - 18:45
जीवनमा बाँच्न चाहिने कुरा कति छन्, कति । देख्नु, भोग्नु र चिन्नुपर्ने कुरा पनि कति छन् कति तर हामी त खाली आफ्नै वरिपरिका अनुहारहरूले घेरिएका छाँैं, आफ्नै वरिपरिका ध्वनिले छेकिएका छौँ । हाम्रा दृष्टि, विचार, चिन्तन र सोच सबै स्वार्थका साना-साना ढिस्काहरूमा ठोक्किएर आफैतिर आउँछन् ।
kbs — Tue, 06/08/2010 - 04:26
जहिले पनि मनको वसमा छ मानिस। मनले उडाइरहन्छ, घुमाइरहन्छ। सँधै सबै समय आफूसँग भइरहने भनेको मन मात्र हो । देखिने गतिविधि शरीरको हुन्छ तर त्यसलाई संचालन गर्छ मनले । कुनै बेला मन र कुनै बेला बुद्धिको हानाथापमा शरीरले आफ्नो यात्र गरिरहेको हुन्छ। तर जीवन बुद्धिले भन्दा मनले धेरै निर्देशित हुन्छ। मानिसले जीवनमा अनुभव गर्ने अधिकांश विषयहरू मनका माध्यमले उत्पादन भएका हुन्छ । भावुकता मनसँग सम्बन्धित हुन्छ। भावुकता नहुंदो हो त मानिसले न माया गर्न जान्दथ्यो न प्रेम गर्न पाउँथ्यो, न उ गृहस्थि नै हुन सक्थ्यो । रुनु, हाँस्न, रमाउनु, नाच्नु, रिसाउनु गम्भीर हुनु सबै कुरा नमसँग सम्बन्धित छन्। र मन नै त्यो अनुभूतिको भण्डार हो जसले जीवनका हरेक क्षण प्रकम्पित गराइरहन्छ ।
kbs — Sun, 09/20/2009 - 10:38
नित्सेले भने- "ईश्वरको मृत्यु भयो ।" ईश्वरको लासको छेउमा टुक्रुक्क बसेर उनले यो कुरो भनेका थिएनन् । बरु मानवसभ्यता र आधुनिक चेतनाको भौतिकस्तर बढ्दै गएपछि मानवजीवन र जगतको गतिविधिलाई हेर्दै भनेका थिए ।
kbs — Wed, 02/25/2009 - 17:21
जीवनमा बाँच्न चाहिने कुरा कति छन्, कति ! देख्नु, भोग्नु र चिन्नुपर्ने कुरा पनि कति छन् कति ! तर, हामी त खालि आफ्नै वरपिरकिा अनुहारहरूले घेरएिका छौँ, आफ्नै वरपिरकिा ध्वनिले छेकिएका छौँ । हाम्रा दृष्टि, विचार, चिन्तन र सोच सबै स्वार्थका साना-साना ढिस् काहरूमा ठोक्किएर आफैँतिर आउँछन् । आफैँले बोलेको आवाज पनि अर्काले बोलेको जस्तो सुनिरहेका हुन्छौँ । सानो सोचमा, सानो घेरामा, सानो स्वार्थमा, सानो उचाइमा उभिएर अहंकारका ठूला स्वरहरू चिच्याइरहेछौँ ।
kbs — Sat, 01/10/2009 - 20:43
"तिमी पनि जान लाग्यौ नानू !" बाबाको अनुहार एकदम दयनीय र कारुणिक थियो । निरीह थिए आँखा । ओठ पनि कैयौँ दिनपछि पहिलोपल्ट खुल्दै गरेका जस्ता थिए । जहाँबाट आएर पनि सधैं बस्ने उहाँको त्यही त एउटा विशेष ठाउँ थियो, जहाँ आज पनि एकोहोरो टोलाएर बस्नुभएको थियो । यस्तो आवाज थियो उहाँको, मैले केही बोल्नै सकिनँ । त्यसै जीउ लल्याकलुलुकजस्तो भयो, मन चिसो भयो । शरीरभरि अनौठो तरङ्ग कुद्यो ।
kbs — Sun, 10/05/2008 - 16:58
हरेक बिहान अफिस जान माइक्रोबस चढ्नुपर्छ भित्ते गणेशबाट। भाडा तिर्ने बेलामा खलासीले सोध्छ― “कहाँबाट चढ्नुभएको?” उत्तर दिन्छु― “भित्ते गणेश।” शायद गणेशको यो नाम काठमाडौंका थुप्रै गणेशभक्तहरूलाई थाह छैन। कस्ता भव्य-भव्य विनायकहरूका अघि यो फुच्चे भित्तेको के मूल्य?
कवि मनु र उनका पहाड चढिरहने कविता
kbs — Fri, 08/22/2008 - 20:58
अर्थबेगर हामी जीवनमा कत्ति पनि अघि बढ्न सक्दैनौं । अर्थ नभए आफ्नै नाम पनि हामी चिन्दैनौं । अर्थ भनेको सङ्केत हो, जसले वस्तुलाई चिनाउँछ । जीवनको यात्रा नै अर्थको खोजीमा छ । के हो, किन हो, भन्न खोजेको के हो, आदि । अर्थ र उत्तरहरूले जीवनलाई परिभाषित गरिरहेका हुन्छन् तर के ती अर्थ र उत्तरहरूले कहिल्यै पूर्णता पाउँछन् , तिनले दिएका अर्थहरू नै जीवनलाई बुझन अन्तिम उत्तर हुन् त ; यही छ समस्या । र कविताको त वास्तवमा के अर्थ हुन्छ र, बरु, त्यसमा त भाव, सङ्केत, संवेग कल्पनाहरू नै हुन्छन् । वास्तवमा तिनमा हाम्रा आफ्नै कल्पनाहरू अटाउने कत्ति ठाउँहरू पनि हुन्छन्, जसले हामीलाई रमाउन मद्दत गर्छन् ।